Kalfadhigii 1aad ee Golaha 5aad ee Baarlamaanka DDSI oo maanta Ka Furmay Jigjiga Laguna Doortay Afhayeenka iyo Madaxwaynaha DDSI. - Cakaara News
Kalfadhigii 1aad ee Golaha 5aad ee Baarlamaanka DDSI oo maanta Ka Furmay Jigjiga Laguna Doortay Afhayeenka iyo Madaxwaynaha DDSI.
Jigjiga(CN) Khamiis July-17-2015. Waxaa 8dii duhurnimo ee maanta si rasmi ah uga furmay kalfadhigii 1aad ee golaha 5aad ee baarlamaanka DDSI iyadoona ugu horayn uu Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka DDSI uu golaha hortiisa ka sheegay in Doorashadii dhacday ee ay asxaabtuku ku tartameen uu XDSHSI ku guulaystay Kuraas dhan 273 sida dastuurka ku cadna uu XDSHSI dhisan karo Qaabdhismeedkiisa dawladnimo.
Gudoomiyaha Maxkamada Guud Mudane Ugaas C/laahi ayaa ka dib sida sharcigu yahay Golaha cod u waydiiyay in ay doortaan 5xubnood oo ah gudiga doorashada hogaanka Golaha ka dib ayaa uu gudigii ladoortay idmeen in xarunta dhexe ee XDSHSI uu ku dhawaaqo Cida afhayeenka baarlamaanka Dawlada loo Doortay oo ahaa mudane maxamed Rashiid Isaaq halkaasoo cod buuxa ay xildhibaanadu ku ansaxiyeen.
Afhayeenka baarlamaanka oo la wareegay hogaamintii Golaha ka dib markii la dhaariyay ayaa xarunta dhexe waydiiyay in la soo dhigo Cida madaxwaynaha loo doortay 5ta sano ee soo socota taasoo xisbigu u xushay Madaxwaynaha mudane cabdi maxamuud Cumar.
Xildhibaanadii iyo martisharaftii oo aad ugu riyaaqday doorashada madaxwaynaha DDSI mudane CMC mar labaad loo doortay ayaa ubaxyo iyo waxyaalo qurxoon qoorta madaxwaynaha ku tuulay halkaasoo kadib uu gudoomiyaha maxkamada Guud uu madaxwaynaha dhaariyay. Dhanka kale doorashadii ka dib ayaa uu Madaxwaynuhu uu Golaha soo hordhigay Golaha Capinetka xukluumaduiisu yeelan doonto kuwaasoo uu goluhu cod buuxa ku ansaxiyay.Sidoo kale dhamaanba xubnaha baarlamaanka cusub ayaa lagu dhaariyay GolahaLiiska Golaha capinetka mardhaw ayaanu idiin soo gudbin doonaa.
2-Afhayeenka Baarlamaanka mudane Mrashiid Isaaq.
3-madaxwayne kuxigeen ahna wasiirka Beeraha marwo sucaad Axmed Faarax
4-madaxwayne kuxigeen ahna wasiirka waxbarashada mudane mawliid Haayir.
5-madaxwayne kuxigeen ahna wasiirka H/guud mudane C/xakiin Cigaal.
6-wasiirka gamacsiga iyo gaadiidka mudane khadar cabdi.
7-wasiirka dakhliga mudane Axmed Maxamed shukri.
8-wasiirka Maamulka shaqaalaha iyo kobcinta Awooda marwo maajida.
9-wasiirka Biyaha Fartuun Cabdi Mahdi.
10-Madaxa xarunta dhexe lehna awooda mxigeen C.casiis maxamed.
11-Wasaiirka DPPC Maxamed Daahir.
12-wasiirka maaliyada mudane Axmaed
13-Waiirka Arimaha Bulshada Axmed Koorae.
14-Madaxa arimaha siyaasada mudane Cumar.
15-wasiirka Tvet C/naasir
16-kuxigeenka ahna Kusimaha Caafimaadaka C/fataax Siciid.
17-wasiirka Haweenka iyo Dhalaanka marwo raxma ugaas maxamuud.
18-wasiirka Xidhiidhka arimaha dawlada Dhaqanka iyo dalxiiska Idiris Ismaaciil
19-Hogaanka nabadgalyada yaasiin
20-Wasiirka Xeerilaalinta Guud C/jamaal Axmed.
21-Wasiirka Jidadka mudane Cabdiraxmaan
22-Wasiirka waraabka iyo horumarinta Dooxooyinka mudane Suldaan Khayre